प्रवासका संघसंस्थाः कति उचित, कति अनुचित - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
प्रवासका संघसंस्थाः कति उचित, कति अनुचित
देश छोडेर प्रवासी भएपछि जुनसुकै देश पुगे पनि आफ्ना देशका मान्छे भेटे आफ्नै घरका दाजुभाइ भेटेजस्तो भान हुन्छ । त्यसमाथी रोजगारीका लागि विदेशीएका नेपालीलाई त आफुसँग भेटघाट भएका सवै नेपाली आफ्नै घरका आफन्त वा दाजुभाइ जस्तै लाग्ने गर्छन् । प्रवास पुगेको जो कोहि पनि अप्ठारो अवस्थामा आफन्तकै खोजी गर्छ ।
परदेशमा आफन्त भनेका तिनै साथीभाई हुन्छन । तिनै साथीभाईको मद्धतले धेरै नेपालीले प्रवासमा आफ्नो दोस्रो जीवन प्राप्त पनि गरेका छन् । कोहि तिनै साथीका कारण जीवनमरणको दोसाँधमा पनि पुगेका छन् । यो पटक चर्चा गर्न खोजिएको कुरा चै साथीभाई भन्दा पनि प्रवासी संगठनहरुको हो । आजको यो आलेखबाट म प्रवासमा संघसंस्था तथा संगठनको आवश्यकता कति छ भन्ने वहस पनि उठाउन खोज्दैछु । यो आलेखमा मैले मलेसिया र खाडीमा गठन भएका संघसंस्थाका वारेमा लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
धेरै नेपालीहरुको रोजिरोटीको माध्यम वनेको प्रवासमा त्यती नै संख्यामा संघसंस्था र संगठन निर्माण भएका छन् । नेपालमा कुनै वेला क्लव गठन गरे जसरी नै प्रवासमा पनि संगठनहरु खोलिएका छन् । केहि संघसंस्था त केवल नामका लागि र देखाउनका लागि पनि गठन भएका छन भने केहिले गतिलै काम गरेका छन् ।
मलेसिया, कतार र युएईमा अरु देशमा भन्दा धेरै नेपाली संघसंस्थाहरु गठन मात्र भएका छैन ति संघसंस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन् । साउदी अरव लगायत देशमा भएको कडा कानूनका वावजुद पनि नेपालीले नेपालीलाई संगठित गरेका छन् । अव प्रश्न उठ्न सक्ला यस्तो जोखिम मोलिमोलि किन संघसस्था वनाउने त ? के स्वार्थ वेगर पनि संघसस्था वनेका छन् त ? प्रवासमा गठन भएका संघसंस्था पनि वर्गीकरण मै छन भन्दा हुन्छ । कुनै संघसंस्था नेपालका राजनीतिक दलका आधारमा खडा भएका छन् भने केहि धार्मीक र जातिय आधारमा गठन भएका छन् । केहि चैं पेसागत रुपमा पनि संगठित भएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले विश्वका विभिन्न देशमा आफ्नो शाखा गठन गरेको छ । त्यस्तै मगर संघ, तामाङ्ग घेदुङ्ग, किरात यायोख्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ्ग लगायतले पनि आफुहरु प्रवासमा छौ है भनेर उपस्थीती देखाएका छन् । नेकपाका संगठनमा आवद्ध हुनेको संख्या पनि प्रवासमा धेरै छ । नेपाली काँग्रेस, राप्रपा मात्रै होइन क्षेत्रीय रुपमा उदाएका लिम्वुवानको संगठनात्मक उपस्थीती पनि मलेसिया र खाडीमा भेटिन्छ । त्यो वाहेक जिल्ला, विगतको अञ्चल वा कुनै नगरका युवाहरु कै संगठन पनि दरिलो रुपमा प्रवासमा देखिन्छन् । ति संघसंस्थामा आवद्ध भएकाहरुले आफ्ना क्षेत्रबाट प्रवासमा पुगेकाहरुलाई सरसहयोग गर्नू सकारात्मक भएपनि वेलावेला ति संघसंस्थामा आवद्धहरु विवादमा मुछिदै आउनुले समस्या पनि पर्ने गरेको छ ।
मलेसियाको एउटा उदाहरण हेरौं । केहि महिना अघि मात्रै नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्षलाई नै ठगी गरेको आरोप लाग्यो । मलेसियामा नै भएका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले उनलाई कारवाहि गर्नुपर्ने माग गर्दै मलेसियास्थीत नेपाली दुतावासमा ज्ञापन पत्र नै वुझाए । उनलाई पदच्युद गरि अर्कै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु प¥यो ।
मलेसियाकै कुरा गर्दा गैर आवसिय नेपाली संघका अध्यक्ष लगायतले नेपालीलाई ठगी गरेको आरोप लाग्यो । सो वारेमा मलेसिया र नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरे । आरोपितले त्यसको सफाइ दिन पत्रकार सम्मेलन नै गर्नु प¥यो । त्यो ठगी थियो कि थिएन, प्रष्ट हुन सकेन । तथापी केहि पिडितहरु अझै पनि उनीहरुले ठगी गरेको दावी गरिरहेका छन् ।
कतारमा पनि एक सामाजिक अभियन्ताले वदमासी गरेको आरोपमा केहि समय कतारको जेलको हावा खानु पर्यो । यसैगरी युएईमा पनि विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा बस्नेहरुले नै नेपालीलाई ठगी गरेको खवर बेला बेला सार्वजनिक भइरहन्छ ।
यी उदाहरण मात्र हुन । हुन त ठगी गर्नेको नियत एक र संघसंस्थाको काम अर्काे भएपनि तिनै संघसंस्थाको आडमा नेपालीले नेपालीलाई ठगी गरेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन । कति घटना वाहिर आउँछन कति त गुमनाम नै हुने गरेका छन् । नेपालमा विपत्ति आएको वेला प्रवासका धेरै संघसंस्थाले प्रवासमा नै रकम संकलन गरे । सवै रकम नेपाल आउन पाएन होला । कतिले तिनै संकलन गरेको पैसाले आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गरेका पनि देखिए । त्यो वाहेक संघसंस्था निर्माण गर्ने नेपाली श्रमिकलाई संगठित गर्ने र उनीहरुवाट संस्थाका नाममा पैसा संकलन गर्ने परम्परा पुरानो हो । हर्ताकर्ताले त्यहि पैसामा मोजमस्ती गरेको समाचार कति भेटिन्छन् । केहि नेपालीहरुले त विरामी नेपाली वा पिडित नेपालीको फोटो नेपालीको जमघट हुने स्थानमा राखेर पैसा संकलन गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिएका थिए । के ति पिडितले त्यो सवै पैसा पाउने गरेका छन् त ?
केहि नेपालीले गरेको गलत क्रियाकलापका कारण धेरै नेपालीहरु पिडित पनि वनेका छन् । वास्तविक पिडीतले पनि सहयोग नपाउने अवस्था आएको छ आजभोली । संघसस्थामा संगठीत गराउनुपूर्व नसोचिकन गरिएका कार्यले तिनै संघसंस्था प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएका छन् । मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा प्रवासका सवै संघसंस्था खराव र गलत नियतले संस्था बनाइन्छ भन्न खोजेको होइन । तर विचार नगरी संघसस्था खोलिनु, फोस्रो आडम्वरका लागि कसैले संघसंस्था खोल्छ भने त्यसवारे विचार गरिनु जरुरी छ ।
केहि संघसंस्थाले राम्रो काम गरेका छन् । तिनलाई सहयोग पनि आएको छ । तर त्यसो भनिरहँदा ति संघसंस्थालाई कसले कसरी सहयोग गरेको छ त्यो पनि खुलाइनु जरुरी देख्छु । संघसंस्था वनाइनु वा त्यसमा काम गर्नेको मात्र प्रशंसा गरिनु अघि त्यसको स्रोत के हो त्यो पनि समाजका अघि छर्लङ्ग हुनु जरुरी छ ।
अत्यमा प्रवासमा वसेर मानविय क्रियाकलापमा संलग्न सवैले यो पनि वुझ्नु जरुरी छ कि प्रवासमा वनेका संघसंस्था सवै वरावरका, सवै एकै भूमिकाका नहुन पनि सक्छन् । कसैले स्वार्थप्रेरीत रुपमा संघसंस्था खडा गर्छ र त्यो संघसंस्थालाई मोहरा वनाएर गरिखाने भाँडो बनाउँछ भने पक्कै पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ त्यो सेवा नभएर स्वार्थ हो जुन पछि पछिसम्म हाम्रै लागि घातक बन्न सक्छ ।
नेपाली पुगेको ठाउँमा संघसंस्था वन्नु स्वाभाविक भएपनि त्यस्ता संघसंस्थामा आवद्ध हुने सवालमा पनि आफुले वेलैमा सोच्नु पर्छ । कतै त्यो संस्थाका एक व्यक्तिका कारण पुरै संस्थाको गरिमा माथी आँच आउँछ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ ।
(मलेसियामा पत्रकारीता गरेका काफ्ले हाल नेपालमा रहेका छन्)
यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा सुरक्षित हुन यी कुरामा ध्यान दिनुस्